Famerenana ny laharana voalohany | Mendrika izany ve ity T-Booster ity?
Home » Serivisy fampandrenesana tariby » Famerenana ny laharana voalohany | Mendrika izany ve ity T-Booster ity?
Ny natiora, ny maha-zava-dehibe ary ny tombotsoan'ny haavon'ny testosterone tsara dia efa noresahina imbetsaka.
Aleo tadidintsika ny sasany amin'ireto hevitra ireto alohan'ny hidirana amin'ny lohahevitra lehibe amin'ity lahatsoratra ity, ny Review of the Testosteron Booster Prime Male.
>> Tsindrio Eto raha te-hahazo ny lahy lahy (an-tserasera tsara indrindra)
Inona no atao hoe Prime Male? Tombony - vokany hafa
Tsaroantsika fa ny Prime Male dia manatsara ny famokarana voajanahary testosterone amin'ny zavamananaina.
Prime Male, ho toy ny famenon-javaboary voajanahary dia manome tombony maro ho an'ny zavamananaina.
Eto ambany isika dia manonona maromaro amin'izy ireo.
1. Mahazo tombony mahery ny hozatra - milaza fohifohy izahay fa midika ho haavon'ny tanjaky ny hozatra izany, miaraka amin'ny fitomboan'ny haben'ny hozatra.
2. Fanatanterahana firaisana ara-nofo - libido - eto isika dia mahita fanatsarana mazava ny fanaovana firaisana ara-nofo sy libido avo kokoa. Amin'ny fampisehoana firaisana ara-nofo dia manana fampiroboroboana ny toetran'ny fananganana isika, miaraka amin'ny fananganana matanjaka kokoa, maharitra ela kokoa ary mihamafy sy lava ny habeny.
3. Voafehy ny tosidra, zava-misy tena ilaina amin'ny fahasalaman'ny mpampiasa.
4. Toy ny tosi-dra, voafehy ihany koa ny tahan'ny kôlesterôla mba hisorohana ny aretina aretim-po.
5. avoaka ny herin'ny mpampiasa, ka voamarika ny fahombiazana tsara kokoa amin'ny fanatanjahan-tena na asa hafa.
6. Ny Prime Male koa dia manampy amin'ny asa ara-tsaina, manome fisainana tsara kokoa ary psikolojia mahery.
Ny tsy maintsy fantatsika dia ny olana amin'ny fihenan'ny testosterone ao aorian'ny telopolo taona fa tsy toe-javatra mora ary tsy azo odian-tsy hita mihitsy.
Ity hormonina ity, izay miavaka amin'ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny vatan'olombelona, ​​dia tokony ho eo amin'ny ambaratonga mety, raha tsy izany, ny vokany dia mety ho mazava amin'ny raharaha tena lehibe toy ny angovo azo, ny toe-po, ny fanaovana firaisana ara-nofo ary ny lanja sy ny tavy fahaverezana.
Ny tena manandanja dia ny hoe rehefa mihabe ny habetsaky ny zavamiaina ao aminy dia lasa miha-antitra haingana kokoa ilay olona, ​​mampiseho ny mariky ny fihenan-tena sy ny fahalemena mba hiadiana amin'ny olan'ny fiainana andavanandro sy lava.
Noho izany, ny fandraisana anjara amin'ny famenon-doha amin'ny maha-Lehilahy Lehilahy azy dia sarobidy ary mamadika ireo vokatra tsy nirina.
Famenon-tsakafo tena mahomby amin'ny maha Lehilahy Lehibe azy, misy akora matanjaka 12 dia azo antoka fa hiantoka ny fahombiazan'ny famerenan'ny testosterone.
>> Tsindrio eto raha hanafatra anao ny lahy lahy (an-tserasera tsara indrindra)
PRIME Male - Composition - Ingredients
Ny tabilao etsy ambany dia mampiseho ny singa mpandray anjara tsirairay avy miaraka amin'ny fihetsika sy ny toetrany.
Ginseng Mena Koreana: ANTI-INFLAMMATORY SY NY FIAROVANA ANTIOXIDANT / PROMOTES BRAIN SY FAMPIASAANA TESTOSTERONE BOOSTS / BOOSTS TESTOSTERONE
Asidra D-aspartika: MITADRIKA NY TESTOSTERONE LEVEL MAMPANDRAY / MITADIAVA PF LH HORMONE
Zinc: MAMPANDROSO NY FAMPANDROSOANA NY VATANA / MANOMBOHITRA NY famokarana TESTOSTERONE / Manatsara ny toetra maha-olona mahomby (toaPills Ed voajanahary) / MAMETRAKA INSULIN / FANAMPIANA HANAFATRA tsara kokoa ny fandaminana
Vitamina D: mampisondrotra ny famoahana ny TESTOSTERONE MAIMAIM-POANA SY TOTAL
Vitamina K2: fanampiana amin'ny famokarana sy ny fikolokoloana ny TESTOSTERONE amin'ny ORGANISME / FANAMPIANA amin'ny ANDROGEN SYNTHESIS
Vitamina B6: FANONTANIANA NY famokarana HORMONES / FANAMBARANA AMIN'NY famokarana TESTOSTERONE
Bioperine: mampitombo ny maha-azo antoka ny sakafo hafa / fisorohana ny fako sy ny zana-ketsa.
Luteolin: FIAROVANA ANTI-INFLAMMATORY SY ANTIOXIDANT / ANTI-CANCER ACTIVITY / PROMOTES LOHATENY FAHASALAMANA / FAMONJENA NY famokarana voajanahary an'ny TESTOSTERONE
Root nettle: PROMOSIANA ny fifandanjan'ny HORMONES / manatsara ny sehatry ny fahasalamana
Manezioma: FANAMPIANA AMIN'NY FOMBA VATANA / MIADY AMIN'NY HGBONE SHGB
Mucuna Pruriens: FAMPANDROSOANA AN'NY L-DOPA FANORENANA NY PROLACTIN HORMONE PREMIASA / FAMOKARANA TESTOSTERONE
Boron: FANAMPIANA METABOLISME CALCIUM / FANDROSOANA NY FAHASALAMAM-BOLA
Ahoana no anaovana azy io?
Famenon-tsakafon'ny fananana fanta-daza fanta-daza, manampy tsy amin'ny famokarana testosterone voajanahary fotsiny fa amin'ny fikolokoloana ny fahasalamana tsara sy ny fahombiazan'ny firaisana.
Ny fiarovana ny zavamiaina amin'ny hormonina vehivavy dia omena ihany koa, raha betsaka ny akora manampy amin'ny famotsorana ny hormonina lahy izay eo.
Mazava ho azy fa ny Prime Male, araka ny filazany, dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny famokarana testosterone ary miaro ny zavamananaina amin'ny faritra maro.
Ny Prime Male dia tsy simika ary tsy mampiasa tsindrona amin'ny fitantananany.
Tombony lehibe amin'ny fiarovana ny mpampiasa ny sarotra rehetra.
Tonga amin'ny endrika pilina entina in-4 isan'andro.
Aiza ary Ahoana no hividianana ny lahy lehibe?
Hita ao aminy tranonkala ofisialy tonga amin'ny vidiny USD69.00 isaky ny tavoahangy. Ny tavoahangy tsirairay dia ampy amin'ny fitsaboana iray volana.
Mety vidin'ny sehatra fivarotana hafa io, na dia tsara kokoa foana aza ny misafidy ny pejin'ilay orinasa.
Misy ihany koa ny tolotra manokana raha misy tavoahangy ambony kokoa tafiditra ao anaty baiko iray.
Eritreritra farany - famaranana
Eny, maro ny fanampiana ho fanamafisana ny famokarana testosterone. Fa maninona no tokony hofidiko ity iray ity?
Efa nomenay ny sasany amin'ireo antony tsara ananan'ity famenon-tsakafo ity. Avelao aho hanome anao hevitra tsara kokoa momba ny fisafidianana ity iray manokana ity.
Tonga soa aman-tsara ny Prime Male, hoy aho, hanome fanampiana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny haavon'ny testosterone ao amin'ny zavamananaina.
Mila fampaherezana isika satria mihena tsikelikely io hormonina io miaraka amin'ny fandrosoana an-taonany maro.
Izy io dia famenon-tsakafo voajanahary mampiroborobo ny toetra mampiavaka ny hozatra (tanjaka, fihomboana ary fahasalaman'ny hozatra).
Manampy amin'ny lanjany sy ny fihenan'ny tavy ary manampy amin'ny fihenan'ny ankapobeny. Tsy dia be loatra ny famenon-tsakafo manambatra an'io toetra io.
Ary farany, hatsangana ny fampirafesana ara-nofo sy ny libido, ka maty ilay olona mba tsy hiatrika olana amin'ny fanaovana firaisana.
Vokatra maro-hetsika mihetsika toy ny fitakiana, araka ny hitantsika tamin'ny namoronana azy.
>> Tsindrio Eto raha haka ny tovolahy praiminisitra amin'ny tranonkala ofisialy
F: Inona ny atao hoe Prime Male?
A: Prime Male dia famenon-tsakafo voajanahary izay manatsara ny famokarana testosterone voajanahary?
F: Milamina ve?
A: Ny maha voajanahary dia tsy miteraka olana na vokany hafa.
F: Mampitombo ny testosterone ihany?
A: Tsia. Ny Prime Male dia manome fanampiana amin'ny faritra maro hafa, ny fanatsarana ny hozatra, ny lanjan'ny lanja sy ny tavy, ny fanaovana firaisana ara-nofo ary ny fiasan'ny saina.
F: Inona no tsy itovizany amin'ireo vokatra mitovy aminy?
A: Araka ny efa noresahintsika tetsy ambony dia manome dingan-javatra maro ary koa, angovo avo lenta, toe-po tsara ary fahatsapana tsara kokoa amin'ny ankapobeny.
F: Aiza no ahitako azy?
A: Misy amin'ny tranonkala ofisialy sy ireo sehatra fivarotana hafa.
Ity atiny ity dia navoakan'ny orinasa WiredRelease. Ny Departemantam-baovao WiredRelease dia tsy nandray anjara tamin'ny famoronana an'ity atiny ity. Ho an'ny fanadihadiana momba ny serivisy famoahana gazety, azafady azafady [email voaaro].